Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Police refute Bangalis news report
The Myanmar police force refuted yesterday the news report about Bangladesh’s border guard deporting at least 340 Muslim Myanmar Nationals.
The announcement of the MPF came one day after the news report spread online.
The news report said the Bangalis were returned to Myanmar with no obstruction from the border guard force of Myanmar.
Meanwhile, social media responded to the news report, denouncing the news for being released without scrutinizing the possible consequences of disrupting the stability of the country during the early days of the new government. –MNA
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်နှင်ထုတ်ခဲ့သော ဘင်ဂါလီလူမျိုးများအား မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ ့မှ လက်ခံထားသည်ဆိုသော သတင်းမှာ မှန်ကန်မှုမရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ ့အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ ့က မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ပြန်လည်နှင့်ထုတ်ခဲ့သော ဘင်ဂါလီလူမျိုးများအား တားဆီးပိတ်ပင်မှုမရှိဘဲ လက်ခံခဲ့သည်ဆိုသောသတင်းမှာ မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ သတင်းမှားသာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ှ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမဝင် ၀င်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်ဂါလီလူမျိုး ၃၄၀ အား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ ့က ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်၍ ပြန်လည်နှင်ထုတ်ခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ ့အနေဖြင့် တားဆီးပိတ်ပင်မှုမရှိဘဲ လက်ခံခဲ့ကြောင်း ပြည်ပသတင်းဌာနများက ပုံနှင့်တကွဖော်ပြခဲ့မှုအပေါ် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ ့လျက််ရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ့ကစီစစ်၍ ထိုကဲ့သို့ သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ဖြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အစိုးရအဖွဲ့သစ် စတင်တာဝန်ယူသည့်အချိန်ကာလတွင် ယခုကဲ့သို့ တည်ငြိမ်မှုမပျက်ပြားစေရန်လှုံ့ဆော်ရာရောက်သည့် သတင်းမျိုးအား စီစစ်မှုမရှိဘဲ မှားယွင်းဖော်ပြခြင်းမှာ သင့်လျော်မှုမရှိကြောင်း တုံ ့ပြန်ဖော်ပြမှုများလည်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများတွင် တွေ ့ရှိရသည်။ (သတင်းစဉ်)